Chombo chitsva chemasuo esimbi uye windows-simbi laser yekucheka muchina
na admin on 20-08-31
Iwo echinyakare simbi madhoo nemahwindo anotonhora uye asina kujeka. Iyo laser mhango zvinhu zvakabatanidzwa mukushongedza kwekugadzira, izvo zvinoita kuti madhoo nemahwindo zvive zvinogara zvichichinja, zvichipa vanhu manzwiro anofadza! Metal laser yekucheka muchina unoshandiswa zvakanyanya musimbi yekugadzirisa indasitiri ...
Mashandiro etsiva laser kutema muchina anoshanda sei?
Munguva yekugadziriswa kwezvinhu uye mabasa ekugadzira, kuitira kuti uwane zvinodiwa zvekugadzira zvigadzirwa, zvishandiso zvakasiyana zvinofanirwa kutemwa muzvimwe zvinongedzo kuitira kuti zvishandiswe muchirongwa chinotevera chekugadzira. Naizvozvo, mune aya maindasitiri ekugadzira nekugadzirisa, zvinodikanwa ...
Ndezvipi zvinhu zvinokodzera fiber laser yekucheka muchina wekucheka kugadzira?
Iyo inozivikanwa fiber fiber laser yekuchekesa ndiyo inonyanya kuzivikanwa indasitiri yekucheka muchina muzana rino ramakore re21. Nemhaka yehupamhi hwayo hwekugadzirisa zvinhu uye nemabasa ane simba, iyo fiber laser yekucheka muchina yakaunzwa zvishoma nezvishoma mumaindasitiri makuru, uye mashandisirwo ayo involv ...
Chii chinokonzeresa kuti laser yekucheka muchina wekucheka kumhanyisa kwesimbi laser yekucheka muchina?
Kusarudzwa kwekumhanya kwesimbi laser yekucheka muchina kwakakosha kwazvo kana uchicheka zvinhu. Kana iyo spidhi ichinonoka, kunyangwe hazvo maitiro acho ari akanaka, zvinokanganisa kugadzirwa. Kana kumhanya kuchikurumidza asi mhando ichibayirwa, iko kuri kutopfuura kurasikirwa. Muchokwadi, iyo yesimbi ...
Isimbi ipi inogona kuchekwa nemuchina wesimbi yekucheka laser
na admin on 20-08-12
Kuvandudzwa kwesainzi uye tekinoroji kuchaunza zvigadzirwa zvitsva zvakawanda, uye muminda dzakasiyana siyana, kune hutsigiro hwakawanda hunogona kupihwa, kunyanya ikozvino kuti michina mishini yakawanda, zvakare nekuti kuvandudzwa kwesainzi netekinoroji kwakaunza zvakanaka. kufambira mberi, izvi ndizvo ...
Nei vakawanda uye vazhinji vagadziri vari kutanga kuteedzera fiber laser yekucheka michina
na admin on 20-08-06
Nekuvandudza uye kufambira mberi kwesainzi uye tekinoroji, kumhanya kwehupenyu hwevanhu kuri kuwedzera nekukurumidza uye nekukurumidza. Munguva ino yemari, hupenyu hwevanhu uye basa zvakatanga kuteedzera kwakanyanya kushanda uye nemazvo, uye fiber laser yekucheka michina inogona kusangana nemhando yepamusoro uye kunyatsoita ...
Ndeipi nheyo inoshanda yeiyo CNC plasma yekucheka muchina
na admin on 20-05-30
CNC plasma yekucheka michina ikozvino yakashandiswa zvakanyanya mumaindasitiri akasiyana siyana uye yava kushandiswa zvakanyanya. Vagadziri vazhinji vanodawo shanduko kubva kuchinyakare yekugadzirisa maitiro kuenda panhamba yekudzora, kuvandudza mashandiro ekugadzirisa uye kuderedza mutengo wevashandi, asi havanzwisise michina, wha ...
Maitiro ekuita laser yekucheka muchina uchitarisa, 50% yevashandisi havazive!
Sezvo isu tese tichiziva, laser yekucheka muchina ine iyo isingaenzaniswi mukana wekucheka simbi jira. Iyo haingori chete yakakwirira yekucheka chaiyo, asi zvakare ine yakatsetseka muchikamu chikamu uye isina burr. Inogona kuzadzisa mhedzisiro ingave iri kucheka gobvu ndiro kana yakatetepa ndiro, uye izvi mhedzisiro zvese zvine laser c ...
Unyanzvi hwekunyengera kwekushandisa Metal Flame Kutema Muchina
na admin on 20-04-21
Metal murazvo wekucheka muchina une wakakura ukobvu kabhoni simbi yekucheka kugona, yakaderera mutengo wekushandisa, application inongogumira kune kabhoni simbi, hukuru hwakakura hwekucheka, Shandong Buluoer Intelligent Technology Co, Ltd. inyanzvi CNC plasma yekucheka muchina, CNC murazvo wekucheka muchina D ...
Unonzwisisa here mirawo inoshanda yesimbi inoona yekucheka muchina
Metal malimi ekucheka machina ane hukuru hwakakura hwebhoni simbi yekucheka kugona, uye mutengo wekucheka wakaderera, saka inogamuchirwa nevazhinji vanogadzira simbi vanogadzira. Shandong Buluoer inoshandira muR & D, kugadzira, kutengesa uye sevhisi yemidziyo yekucheka laser, midziyo yekushambadzira, CNC ...
Kuchengetedza kana laser yekucheka muchina icheka jira simbi
na admin on 20-01-06
Paunenge uchishandisa laser yekucheka michina, iyo yekucheka nzvimbo iri padyo nekutarisa iri yakatsetseka. Unoziva sei pfungwa Laser nokuveza muchina iri papi? Nhanho yekutanga yekucheka ndeyekutsvaga yakanaka yekutarisa chinzvimbo, chinova chinyorwa icho munhu wese ane hanya nacho kwazvo. Chekutanga...